Ihe omuma nyocha nke AFRAY'da, ndi nlere ndi mmadu. RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region03 AfyonkarahisarAFRAY dechara Nnyocha, Project Tender
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 03 Afyonkarahisar, Central Anatolia Region, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey 0
afrayda etut maka oru ngo a
Mayor Mehmet Zeybek'in oru AFRAY, nke bụ otu n'ime nkwa nke atụmatụ ntuli aka na ọmụmụ rụpụtara ihe dị mma. Mayor Zeybek gwara ODAK, kon AFRAY na oru ngo a ga-eme n'ọnwa Ọktọba. Obi dị m ụtọ iso ụmụ amaala m ozi ọma. ”
Otu n'ime nsogbu kachasị nke Afyonkarahisar obodo bụ igbochi ụgbọ njem ọha na mkpọchi okporo ụzọ.
180 ga-emechi ụbọchị
A ga-ejikọ TURTA mmemme ahụ na AFRAY. E zigara 7 puku TL na Directorate Mpaghara maka ọrụ ọmụmụ. Achoputara na ego a jiri mezue ihe omumu nke AFRAY. Mayor Mehmet Zeybek kesara ozi ahụ na ntanetị AFRAY ga-eme na October na 680. Z Companylọ ọrụ 22 Drilling ga-emeri ncha maka ọrụ a ka TCDD22 Mpaghara Directorate ga-enwe na Ọktọba. ga-ekpebi ntinye ihe owuwu nke AFRAY na 7 site na ọnụego nke ụzọ ahụ, ọkachasị nyocha ala. AFRAY nke obi TCDD 180 dị na 2020. Nke a ga-eme ya na Directorate Mpaghara anyị. " (Che/ Ahmet Sarlık)
TCDD Nurdağ - Ebe obibi Başpınar New Survey okporo ụzọ, Project, Engineering na Consultancy Ọrụ Nkọwapụta Ọhụụ Ọhụrụ E Dere 18 / 04 / 2012 Ihe omumu ohuru banyere ihe omuma maka Demiryolu New Railway Survey, Project, Engineering and Consultancy Services n'etiti Nurdağ na Başpınar Stations ecek nke a ga-edeba n'aka General Directorate of State Railways (TCDD) nke Republic of Turkey. Biko pịa ebe maka ozi ndị ọzọ. m www.yatirimlar.co
1 AFRAY. Ejikere nkeji nkeji 22 / 07 / 2019 Afyon Gar na Mahadum Kocatepe AFRAY 1. Ozo 2. E kenyere ahịrị maka iji rụọ usoro ahịrị, nyocha, oru ngo, injinịa na ọrụ ị jụọ ajụjụ. Mayor Mehmet Zeybek, TCDD 7. Akwụghachi onye Director Regional Adem Sivri nleta nlọghachi. TCDD 7, onye gwara Mayor Zeybek banyere onodu ohuru nke ihe oru AFRAY, nke di n’ime nkwa nke Mayor Mehmet Zeybek. Onye Nchịkwa mpaghara Adem Sivri, Onye isi oche nke State Railways, Directorate of Survey na Project Ngalaba Nhazi na Nhazi Ala Ala n'etiti Afyon Gar na Mahadum Kocatepe 1. Ozo 2. Ot ...
Ihe na-eme ngwa ngwa na-arụ ọrụ na-emetụ ihe nyocha ahụ 19 / 03 / 2014 Cankiri - Ankara Junction - Rod -Şabanöz Nkewa ụzọ ọmụmụ Ngo obi Toker - Uwe mkpuchi akwa General Directorate Project nkwonkwo ịmalite merie Highways (KGM) nke ga-rụrụ site "(Cankiri - Ankara) Junction - (Stick-Şabanözü) Junction Highway Survey na Design Consulting ọrụ ị nweta "ọmụmụ metụtara obi nwale e dechara. Dị ka ozi natara Investments Magazine; Kpọmkwem na-eri na-ekpebisi ike dị ka 1.851.782,02 755.559 pound pound obi-enye Toker - Uwe mkpuchi akwa merie nkwonkwo ịmalite oru ngo. Mgbe Mmebi nke iwu usoro ga-kpọrọ ụlọ ọrụ na merie ndị obi nkwekọrịta. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ mara ya dị ka ihe siri ike obi kpebisiri ike dị ka ndị a: 1. ...
TCDD Nurdağ - Ebube Başpınar New Railway Project A bịanyere aka na nkwekọrịta Yüksel Proje nke na-enweta obi ebere maka nnyocha, oru ngo, injinia na ọrụ ndụmọdụ. 20 / 04 / 2012 Turkish State Demiryo (TCDD) onye ga-ebu site na General Directorate, "Nurdağ - Mills New Cross Railway Stations Survey, Design, Engineering na Consulting Services" e dere metụtara ndị ị nweta nke ọhụrụ tolite. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Yuksel kwuru ngo ụlọ ọrụ merie ndị obi nkwekọrịta e banyere na 2.956.348 pound. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ekere òkè obi dị ka ọ na a maara, kpebisiri ike dị ka ndị a: Enamel Engineering Onye na-egbu egwuregwu.: Investment Journal 1070 / 05 2012 March (EA) UBM - Assembly Project
Eti Maden Kırka - Değirmenözü Railway Line Project A bịanyere aka nkwekọrịta na KMG Proje nke meriri obi maka ọrụ nyocha na ọrụ nyochaa nkà na ụzụ 24 / 10 / 2012 Akwukwo ohuru na edere na mel Kırka - Değirmenözü Railway Line Surveying, Design and Engineering Consultancy Service mel nke General Directorate nke Eti Mine Works. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; e tinyere aka na KMG Project firm na 11 October 2012 585.000 pound na nkwekọrịta ahụ. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
TCDD Nurdağ - Ebe obibi Başpınar New Survey okporo ụzọ, Project, Engineering na Consultancy Ọrụ Nkọwapụta Ọhụụ Ọhụrụ E Dere
1 AFRAY. Ejikere nkeji nkeji
Ihe na-eme ngwa ngwa na-arụ ọrụ na-emetụ ihe nyocha ahụ
TCDD Nurdağ - Ebube Başpınar New Railway Project A bịanyere aka na nkwekọrịta Yüksel Proje nke na-enweta obi ebere maka nnyocha, oru ngo, injinia na ọrụ ndụmọdụ.
Eti Maden Kırka - Değirmenözü Railway Line Project A bịanyere aka nkwekọrịta na KMG Proje nke meriri obi maka ọrụ nyocha na ọrụ nyochaa nkà na ụzụ
TPC Izmir Bay agafe na Connection Project ọmụmụ Ngo, gụnyere okporo ụzọ na okporo ígwè systems consultancy ọrụ nkwekọrịta e banyere na ụlọ ọrụ na merie ndị obi maka oru ngo Yuksel
TCDD Istanbul - Ọganihu Ankara High Speed ​​Train Project Nkwekọrịta nchikota nchikota - oru ngo, ọrụ ntinye aka nke ọrụ na-akwadebe site na Yüksel Proje
Narlı - Akçagöze Stations Project Yüksel Proje Company nwetara obi maka nyocha ụzọ ụgbọ okporo ígwè abụọ, ọrụ, injinịa na ndụmọdụ